UNcobo uwusola kumshushisi wePSL umsindo wamacala - Impempe
UNcobo uwusola kumshushisi wePSL umsindo wamacala
Owayeyimenenja yePremier Soccer League (PSL), nonompempe ohlonishaywayo kuleli, u-Ace “Mr Spot On” Ncobo, ugxeka umshushisi wePSL ngesiphithiphithi esiqhubekayo esithinta iRoyal AM neSekhukhune United.
UShauwn “MaMkhize” Mkhize, ophethe beRoyal AM, akahlehli, ulokhu elidlulisela phambili icala lokuthi yiqembu lakhe okumele libe ngompetha beGladAfrica Championship.
Konke kuqale ukuthi kuphambane ngesikhathi umehluleli ozimele ekhipha isinqumo sokuthi iSekhukhune inikwe amaphuzu amathathu ecaleni layo nePolokwane City.
La maqembu adlala ngoJanuwari lapho kwathokala ukuthi iPolokwane ayiwugcinanga umthetho wabadlali abahlanu abangaphansi kweminyaka engu-23.
“Mina ngingagxeka umshushisi wePSL ngalokhu. Khumbula phela ukuthi iDisciplinary Committee yePSL izimele futhi akumele kugxanjukelwe kuyo, gakho kunzima ukugxeka iPSL ngokungathethwa kwamacala ngesikhathi,” kusho uNcobo.
AmaProteas ajike umlando eshaya iWest Indies ekuhambeni: https://bit.ly/3j1dFH7
Ugcizelele ukuthi akazi yini ebanga kuhambe kancane ukuhlala kwamacala “kodwa mhlawumbe sikhona isizathu salokho, esingasazi thina”.
“Ubulungiswa bugcina bukhona bona. Nokho into ebuhlungu ukuthi ngesinye isikhathu ubulungiswa abuvuni wena.
“Angiyena ungoti uma kukhulunywa ngezinto zasenkantolo ngakho ngeke ngazi ukuthi umphumela kuzogcina kuyimuphi,” kusho uNcobo.
Njengamanje uMaMkhize neRoyal AM bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke bayidlale imidlalo yokuhlunga ngoba bafuna kwenzeke ubulungiswa. IRoyal AM ifuna kube iyona eba ngompetha be, hhayi iSekhukhune njengoba kunqume inkantolo enkulu yaseGoli.
I-Austria iphume emafutheni yangena emlilweni kwi-Euro: https://bit.ly/3wMNtUJ
Imidlalo yokuhlunga idlalile ngempelasonto lapho kuwine khona iChippa United ngo 2-1 ibhekene neRichards Bay FC. NgoLwesibili kumele kubhekane iRoyal AM neChippa emdlalweni wesibili kodwa uMaMkhize uthi ngeke balubhade kulowo mdlalo, kunalokho bazoqhubeka nokuya enkantolo.
UMaKhize ubhalele iPSL eyixwayisa ngokuthi yephula umthetho ngokuqhubeka nale midlalo. Uphinde wakhipha ne-video la echaza khona ukuthi kungani engeke aye kulo mdlalo wangoLwesibili.
“(Isinqumo senkantolo) sithi yonke into kumele ime kuze kube kuphuma isinqumo ngekufakelwa inselelo isinqumo senkantolo. Alukapheli ke lolo daba, lusafakwe enkantolo.
“Bakwethu, mina ngiyanqaba ukuxhashazwa, ikakhulukazi ngixhashazelwa into ebalulekile. Ngiyisakhamuzi esiwuhloniphayo umthetho, angifuni ukuboshwa.
“Mina ngeke ngikwazi ukwenza into ephikisana nesinqumo senkantolo. Ngiyazi nibheke ukuthi ngiyodlala le midlalo, kodwa ngeke ngikwazi ukuyodlala leyo midlalo,” kusho uMaMKhize.
UNcobo, osesebenza kwiSuperSport TV lapho ahlaziya khona izinqumo zonompempe, uphethe kanje: “Engingakusho ukuthi umehluleli ozimele usebenzise imithetho yeNSL ngendlela efanele neqondile.”
Previous Previous post: I-Austria iphume emafutheni yangena emlilweni kwi-Euro
Next Next post: UKomphela kwiPirates, sidalula okubambezele
One thought on “UNcobo uwusola kumshushisi wePSL umsindo wamacala”
Pingback: UBvuma ubashiye bevuma bethi ‘Yes Baby’ - Impempe